काँग्रेस नेता महतले ओलीलाई टार्गेट गरी अर्थमन्त्री खतिवडालाई दिए यस्तो उपदेश | सु-सुचित नेपालको चित्र
काँग्रेस नेता महतले ओलीलाई टार्गेट गरी अर्थमन्त्री खतिवडालाई दिए यस्तो उपदेश
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता रामशरण महतले मुलुकको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक रहेकोले बताउँदै लगानी कर्ताको पक्षमा कानून निर्माण गर्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई सुझाएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेता महतले देशमा महँगीले सीमा नाघेको र भ्रष्टाचार बढेको बताए।
शनिबार रिपोर्टस क्लबको साक्षात्कारमा नेता महतले भने, ‘प्रधानमन्त्री डाबोस जानुभयो । अत्यन्तै राम्रो हो । तर, देशको अवस्था नसुधारेसम्म लगानी आकषिर्त हुँदैन ।’ देशमा सुशासन छ कि छैन ? भएका नियम, कानुनहरु राम्रोसँग पालना हुन्छन् कि हुँदैनन्?भ्रष्टाचार समाप्त भएको छ कि छैन? भन्ने हेनुपर्ने उनले बताए ।
यो सबै निराशजनक रहेको भन्दै उनले विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेश रिपोर्ट’ मा नेपालको लगानीको वातावरणको अवस्था घटेको उल्लेख भएको स्मरण गरे । टा्रन्सपरेन्सी ईन्टरनेश्नलको रिपोर्टले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको उनले बताए ।
नेपालमा पछिल्लो समय लगानीकर्ताहरु आतंकित भएको भन्दै महतले भने,’लगानी गर्छु भन्ने मान्छेहरु पनि अहिले हच्किएका छन् । लगानी गरेकाहरु पनि उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’ लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको तयारीमा प्रश्न उठाए ।